नौ श्रीमतीका श्रीमान् भन्छन्- ‘म सबै श्रीमतिसँग बच्चा जन्माउन चाहन्छु।’
April 7, 2022 adminLeaveaComment on फिगरकै कारण भाइरल १४ वर्षिया फुच्ची को हुन् त् आखिर ?
कसैलाई प्रकृतिले बरदान नै दिएको हुन्छ । उसलाई न उमेरले नै छेकेको हुन्छ । अहिले अलेक्जेन्डरो नाम गरेकी एक फुच्ची केटी खुबै भाइरल छिन् । उनी भाईरल हुनुको कारण हो उनको फिगर । तस्बिर देख्दा धेरैजसोलाई दिमागले धोका दिन्छ । बच्चा भएर पनि उनको फिगर यस्तो छ कि लाग्छ उनी कुनै अर्धबैँसे युवती हुन् । […]
April 7, 2022 adminLeaveaComment on ए मेरो हजुर ४’का लागि जी-बबले गाए गीत
काठमाडौं । जी-बब नामले चर्चित र्‍यापर सुदीप भण्डारी अहिले चर्चामा छन् । एएनटीएफ गायन प्रतिस्पर्धाबाट चम्किएका यी तन्नेरी सामाजिक सञ्जालमा भाइरल छन् । जी-बबलाई लिएर नयाँ खबर छ । अनमोल केसी स्टारर ‘ए मेरो हजुर ४’को एउटा गीतलाई उनले गाएका छन् । गीतमा उनकै शब्द र संगीत रहेको जनाइएको छ । अनमोल र जी-बबबीच बुधबार […]
April 7, 2022 adminLeaveaComment on किन छुटेनन् पल ? कानुनको गलत प्रयोग गरियो भन्दै पलका वकिल मिडियामा।
ना वा लि ग लाई ब ला त्का र गरेको अभियोगमा थुनामा रहेका अभिनेता पल शाहको थुनछेक बहस आज हुँदैछ। जिल्ला अदालत नवलपुरमा आज शाहविरुद्धको मुद्दामा थुनछेक बहस हुन लागेको हो। त्यसका लागि मंगलबारै शाहलाई तनहुँ हिरासतबाट नवलपुर लगिएको थियो। शाहविरुद्ध तनहुँ र नवलपुर जिल्ला अदालतमा ज ब र्ज स्ती क र णी मुद्दा दर्ता […]
April 7, 2022 adminLeaveaComment on छिमेकीको १० वर्षका छोराको ज्यान लिएर सेफ्टी ट्यांकी हाले शव, ५ दिन पछि यस्तो अवस्थामा फेला परे
काठमाडौ । सर्लाहीमा फेरी अर्को घटना भएको छ । एक १० वर्षका बालक ५ दिन देखि हराइरहेका थिए । उनको शव छिमेकीको सेफ्टी ट्याकंकीमा फेला परेको छ । सर्लाहीको गम्हरियाबाट पाँच दिनदेखि हराइरहेका १० वर्षका बालकको शव फेला परेको हो । मलंगवा–१२ स्थित गम्हरियाबाट हराएका जितेन्द्र ठाकुरका अन्दाजी १० वर्षका छोरा आकाश ठाकुर भनिने मिठुको […]
April 7, 2022 adminLeaveaComment on नौ श्रीमतीका श्रीमान् भन्छन्- ‘म सबै श्रीमतिसँग बच्चा जन्माउन चाहन्छु।’
काठमाडौं : ९ जना युवतीसँग विवाह गर्ने युवकले आफूले सबै श्रीमतीबाट बच्चा जन्माउने सपना रहेको बताएका छन्। आर्थर नाम गरेका उनी ब्राजिलका हुन। पेसाले मोडल रहेका उनले गत वर्ष विवाह गरेका थिए। उनी त्यतिबेला चर्चामा आए जब उनले एकैसाथ ९ युवतीसँग विवाह गरे। उनी भन्छन्, ‘मैले एक वा दुई श्रीमतीसँग मात्रै बच्चा जन्माए त्यो अरु […]
नवलपरासी जिल्ला अदालतले पनि दियो पललाई थुनामा पठाउने आदेश, अब के गर्छन पल ?
April 7, 2022 adminLeaveaComment on नवलपरासी जिल्ला अदालतले पनि दियो पललाई थुनामा पठाउने आदेश, अब के गर्छन पल ?
काठमाडौं– यसअघि तनहुँ जिल्ला अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको थियाे। दुवै जिल्ला अदालतले एकै आदेश दिएपछि मुद्दाको किनारा नलागेसम्म शाह थुनामा रहने भएका छन्। बुधबार न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासले शाहलाई तनहुँमै थुनामा राख्न आदेश दिएको हो। नवलपुरमासमेत परेको बला’त्का’रको उजुरी घटनामा थुनछेक बहसका लागि शाहलाई मंगलबार तहनुँबाट पठाइएको थियो। शाहविरुद्ध एक नाबालिक गायिकाले तनहुँ र […]
April 7, 2022 adminLeaveaComment on यिनै हुन् जसले ट्युशन पढ्न जाँदै गरेकी कबिताको ज्यान लिए !
काठमाडौ । एका विहानै ट्युशन पढ्न जाँदै गरेकी किशोरीको ज्यान लिने युवकलाइ प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ । उदयपुर प्रहरीले बेलका नगरपालिका–६ की १६ वर्षीया किशोरी कविता सुनुवारको ज्यान लिएको अभियोगमा पक्राउ परेका दुई जना मध्य एक जनालाई सार्वजनिक गरेको हो । एक जना नाबालिग भएका कारण प्रहरीले उनको पहिचान गोप्य राखेको छ । […]
April 7, 2022 adminLeaveaComment on ‘सूर्यलाई भोट हाल्ने मेरी बूढी पँधेरोबाट आउँदा माओवादी प्रवेश गरिसकिछन्’
काठमाडौ । स्थानिय तहको निर्वाचनको घोषणा पछि सबै राजनीतिक दल अहिले निर्वाचनमा होमिइसकेका छन् । केही मुख्य नेताहरु पार्टी प्रवेशको कार्यक्रमको दौडधुपमा लागेका छन् । केही दिन अघि अभिनेत्री करिश्मा मानन्धर नेकपा एमालेमा प्रवेश गरिन् । उनी एमाले प्रवेश गरेको समाचार भन्दा उनले कपिलबस्तुमा गरेको एउटा भाषण निकै चर्चित बन्यो । उनले आफ्नो न्वारनको नाम […]
April 7, 2022 adminLeaveaComment on बिचरा १० कक्षा पढ्दै गरेकी कविताले बाबासँग यस्तो भएकी रहिछन ! उनले भनेको यस्तो शब्द जसले सबैलाई रुवाउने छ
बाबा मलाई डाक्टर पढाउन सक्नुहुन्छ ? नत्र विदेश त पठाउन सक्नुहुन्छ नि ! धेरै पढेर वा विदेश गएर म तपाईंहरूलाई सुख दिन चाहन्छु ।१० कक्षा पढ्दै गरेकी छोरी कविताले भनेका कुरा सम्झिँदै भक्कानिन्छन् ४६ वर्षे कृष्ण सुनुवार । उनले जवाफ दिएका थिए- जग्गा बेचेर भए पनि तिमीलाई डाक्टर पढाउँला ।’ पढाइमा मिहनेती र अब्बल छात्रा […]
April 7, 2022 adminLeaveaComment on पल शाहको यस्तो छ पछिलो तस्बिर, थुनामा राख्ने आदेश पछी राति ९ बजे तनहुँ लगियो
पूर्वीनवलपरासी — किशोरी ब ला त्का र को अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका अभिनेता पल शाहलाई जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ । मुद्दाको किनारा लगाउने समयसम्म थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने आदेश दिएको हो । न्यायाधीश अर्जुन अधिकारीको इजलासबाट बुधबार शाहलाई तनहुँमै थु’नामा राख्न आदेश दिएको हो । शाहलाई बुधबार नै तनहुँ पठाइएको छ […]
फिगरकै कारण भाइरल १४ वर्षिया फुच्ची को हुन् त् आखिर ? April 7, 2022
ए मेरो हजुर ४’का लागि जी-बबले गाए गीत April 7, 2022
किन छुटेनन् पल ? कानुनको गलत प्रयोग गरियो भन्दै पलका वकिल मिडियामा। April 7, 2022
छिमेकीको १० वर्षका छोराको ज्यान लिएर सेफ्टी ट्यांकी हाले शव, ५ दिन पछि यस्तो अवस्थामा फेला परे April 7, 2022
नौ श्रीमतीका श्रीमान् भन्छन्- ‘म सबै श्रीमतिसँग बच्चा जन्माउन चाहन्छु।’ April 7, 2022